နသိုးကြိုးပြတ် – Grab Love Story
ဟင်း .. ထွီ .. ဒီနားကလဲ နံလိုက်တာ .. ဟယ်တော့ … ခွေးချီး ” ပထ၀ီဆရာမ အေးအေး ထင်းရူးပင်ခြေရင်း၌ ၀င်ထိုင်ရင်း အလန်.တကြားအော်ရင်း ထိုင်ရာမှပြန်ထကာ ထမီကိုငုံ.ကြည့်နေခိုက် သူတို.သုံးဦးလစ်ထွက်ခဲ့ကြလေသည်။ သည်ကိစ္စ ဤကိစ္စ … ရေဆုံးရေဖျား အငယ့်အား ပြောပြရန် ကိုအောင်စိုးဝန်လေးနေမိသည်။ “အငယ်… ငိုချင်တယ် …အကိုစိုးရယ် ” “ငိုလေ.. ငိုလိုက် .. ခလေးတွေတော့ငိုရင် အားရှိတယ်တဲ့ ” “အကိုစိုးက မကြင်နာတတ်ဖူး ” “အကြင်နာဆိုတာ ဆယ်တန်းအောင်မှ ပြောရင်ပိုကောင်းမလားဆိုပြီး .. ငါဘယ်သူ.မှမပြောခဲ့ဖူးဘူး … အငယ်” “ဘာလဲ … ဆယ်တန်းမအောင်ခင်ပြောတော့ရော ” “စိတ်ကူးယဉ်အိပ်မက်ပျက်ပျယ်ရင် လူတွေမှာခံစားရလေ့ရှိတဲ့ ကြေကွဲမှုမျိုးကို .. ငါမခုံမင်တတ်သေးဘူး ” “အစ်ကိုစိုးမှ မချစ်တတ်သေးတာ ” “နင် ပက်ထရစ်ကို ဘာကိုချစ်တာလဲ ” “ဘယ်သိမလဲ …ချစ်တာပဲသိတာ ” အငယ်က ရှက်ရွံ.နီရဲသွားသောမျက်နှာလေးငုံ.သွားကာ တိုးတိုးလေးပြောသည်။ ရင်ဖိုလှိုက်မော လေသံလေးပါသည်။“နင့်အရွယ်က ငယ်သေးတယ် အငယ် … စိတ်လှုပ်ရှားတတ်တဲ့အရွယ်လေး .. ကိုယ့်ကိုချစ်တယ်လို.ပြောလာသူတိုင်းကို ရင်ခုန်တဲ့အချစ်လို.ပဲ နင်တို.နားလည်သေးတာ ” “အစ်ကိုစိုးစကားကို အငယ်လိုက်မမှီပါဘူး ” “အဲ့ဒါ အလကားနင်ပြောလိုက်တာ . ငါသိတယ် နားလည်တယ် … သိပ်နားလည်တယ် … ချစ်တယ်ဆိုတာ ဖိုမတွေအတွက် မလွဲမသွေ ကြုံလာရမဲ့ကိစ္စပါ … ငါအပြစ်မပြောဘူး … ဒါပေမဲ့ ပညာသင်နေတုန်းမှာ အနှောက်အယှက်မဖြစ်စေချင်ဘူး … အေး ဘွဲ.ရပြီးရင် စဉ်းစားတော့ ” “အိုးး မဟုတ်တာ … အချစ်ကိုသော့ပိတ်ထားလို.ရလား” “မတောက်တခေါက် ၀တ္ထုထဲကစကားလုံးတွေ ငါ့ရှေ.မှာမသုံးချင်စမ်းပါနဲ. အငယ်.. နင့်ထက် ငါစာဖတ်သန်တယ် ” ကိုအောင်စိုးစကားပြောရင်း ကျောင်းဝင်းအပြင်သို.လှမ်းထွက်ခဲ့သည်။
အငယ်က မမှီမကန်းလေးလိုက်လာသည်။ “အစ်ကိုစိုး .. မညာနဲ. .. သူနဲ.တွေ.ခဲ့တယ်မို.လား ..ဟင် …ပြီးတော့ … ကရင်မနဲ.ဖြစ်နေပြီလို့ ပြောတယ်မို. လား … အစ်ကိုစိုးတောင်ထိုးသေးတယ် … ဝေလင်းဆွဲလို.တဲ့ ” “ဟင် နင့်ကို ဘယ်သူပြောလဲ … အငယ် ” အငယ်က ကြေကြေကွဲကွဲလေး လုပ်ရယ်ရယ်ပြသည်။ “ဟင်း ..ဟင်း.. အစ်ကိုစိုးရယ် … အငယ့်မှာလဲ အပေါင်းအသင်းတွေနဲ.ပါ .. ပြောပြကြတာပေါ့ နော ” “အေး .. နင်သိရင်ပြီးတာပဲ . နောက်တစ်ခါ ပြဿနာဖြစ်ရင် ငါဝင်မရှင်းချင်ဘူး … ဒါပဲ ” “မဖြစ်စေရပါဘူး အစ်ကိုစိုး ” … “အောင်စိုးရေ .. တစ်ရာ့ငါးဆယ် အရင်ချိုးခဲ့ဟေ့ ” “ဟုတ်ကဲ့ လေးလေး ” ဦးလေးဖြစ်သူမှာ စိုက်ပျိုးရေးဖြင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုနေသူ … စစ်ပြန်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး စည်းစနစ်ကျန တင်းကြပ်သည်။ပန်းများတပွေ.တပိုက်နှင့်အောင်စိုးအိမ်ဆီပြန်လာသည်။ “ကိုအောင်စိုးက ဒီနှစ်ဆယ်တန်းလား ” ပန်းဖောက်သည် မလေး မခင်ထွေးကနှုတ်ဆက်မေး မေး၏။ “ကိုးတန်း ပါ … ကျနော်က ကျောင်း .. ကျောင်းနေ နောက်ကျတယ်လေ ” “အော် .. ဟင် ပန်းတချို.ကပိုးတွေနဲ.တော့ ” “ဗျာ … ပိုးတွေ.တယ် ” အောင်စိုးလန်.သွားသည်။ ဂန္ဓမာခင်းကို ပိုးစိမ်းကျလျှင် ဖောက်သည်များမကြိုက်တတ်ချေ။ မမြင်ရသော်လည်း အငုံပွင့်များထဲ၌ ဘသားချောတို.ကခိုနေတတ်ပြီး ပွင့်အာလာသောသေးမျှင်သည့် ပွင့်ချပ်များကို အရုပ်ဆိုးစွာ ကိုက်ဖြတ်တတ်ကြသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ “ပေး .. ကျနော် လဲပေးမယ် ” “ရပါတယ် .. ဟို .. ပိုးတွေ.တဲ့အကြောင်းပြောတာ ” အောင်စိုးလှမ်းယူလိုက်သော လက်က ခင်ထွေးရင်နှစ်မွှာကို အိကနဲ .. ထွေးကနဲ .. နှိပ်လိုက်ဖိလိုက်သည်။ ခင်ထွေး အံ့အားသင့်ပြီးနောက်သို.တွန်.သွားလေသည်။
မခင်ထွေးမှာ အသက် ၂၃ နှစ်ခန့် ရှိပြီး လုံးကြီး ပေါက်လှကြီး ညိုစိမ့်စွာ ချောမောသူဖြစ်သည်။မျက်နှာလေးကအဆင့်အတန်းမြင့်မြင့်လှသည်။ ချောသည်။ သွယ်တန်းထူထဲသော မျက်ခုံးလေးများက နက်မှောင်နေပြီး မျက်ဝန်းအစုံကပြာလဲ့နေသည်။ ထင်းထင်းလေး ပေါ်နေသောနှာတန်လေးက စင်းနေသည်။ သေးကွေးသော နှုတ်ခမ်းဖူးဖူး ပြည့်ပြည့်လေးက အမြဲလို ဆေးမဆိုးပဲ ရွှန်းစိုနေတတ်သည်။ အောက်နှုတ်ခမ်းလေးက ပိုမိုထူထဲပြီး အလယ်၌ချိုင့်ဝင်နေသယောင်…။ တင်းတင်းရင်းရင်း ရင်နှစ်မွှာက ပေါက်စီနှစ်လုံးနှယ် အိအိထွေးထွေး ကိုင်မိရာ … ဖိန်းကနဲ … ရှိန်းကနဲ တုန်သွား၏။အနီပွင့် အနက်ခံထမီလေးကို တင်းနေအောင်စည်းနှောင်ထားသော ခါးအောက်မှ တင်ပါး ကျစ်ကျစ်လေးများက လုံးကြွမောက်တက်နေပြီး .. အိပဲ့ပဲ့ကြီးမဟုတ်ဘဲတင်းတင်းရင်းရင်းဖြင့် ရင်မောဖွယ် ကျစ်လျစ်လှပနေကြသည်။ထမီတိုတိုဝတ်ထားသဖြင့် ပျော့ပြောင်းရှည်လျားသော ခြေသလုံးမွေးပါးပါးတို့ က နှင်းရေတို.ဖြင့်စိုပြီးကပ်နေသည်မှာအတွေးချဲ.စိတ်ကူးယဉ်စရာကောင်းလှ၏။ “သွား… အရမ်းပဲ ” မခင်ထွေး ပန်းများကို ပန်းခြင်းထဲသို.ထောင်ပြီး စီထည့်ကာအတော်လေးရှက်သွားဟန်နှင့်သည်တစ်ခွန်း ပြောသည်။ကိုအောင်စိုး နားရွက်ကြီးများနီပြီး .. လဒကြီးလို ငေါင်စင်းစင်းလုပ်ရင် .. မြေကြီးကို ကြည့်နေသည်။ “သွားမယ် … တောင်းပင့်ပေး ” ခင်ထွေးက အောင်စိုးကိုမကြည့်ပဲ ဘုဆတ်ဆန်ပြောသည်။
အောင်စိုးက သံပတ်အရုပ်ကြီးလိုပင် … ခင်ထွေးအမိန်.အတိုင်း တောင်းကိုပင့်ပေးလိုက်သည်။ မျက်နှာနှစ်ခုက တစ်ပေခန်.အကွာ၌ ဆုံမိကြသည်။ တဒင်္ဂလေးရယ်ပါ။ ရီလဲ့ ချိုရွှင်နေသော ခင်ထွေးမျက်ဝန်းလဲ့ပြာပြာကို အောင်စိုး သေသေချာချာ တွေ့ လိုက် ရသည်။နှုတ်ခမ်းက စူထားသော်လည်း ထောင့်ကွေးလေး၌ အပြုံးရိပ်လေးများခိုတွယ်နေသည်ကိုတွေ.လိုက် ရသည်။ ” ခွေးကြည့် ဦး ” ခင်ထွေးအသံက ဘုဆတ်ဆတ် ထွက်လာပြန်၏ ။ အောင်စိုး စက်ရုပ်ကြီးဖြစ်နေရှာသည်။ ရန်လုံကြီး၏ လည်ပင်းကို အရေပြားမှဆွဲကိုင်ထားလိုက်သည်။ခင်ထွေး ဘောက်ဆတ် ဘောက်ဆတ်ဖြင့် ခြံဝသို. ခပ်သုတ်သုတ်ထွက်သွားသည်။ တင်ပါးသားလေးများ နိမ့်ချည် မြင့်ချည်ဖြင့် အောင်စိုးကို ပျက်ရယ် ပြုသွားကြသည်။အောင်စိုး ရင်တွေခုန်နေသည်။ ရယ်ချင်သလိုလို .. ဟေး ကနဲ တအားအော်ပစ်လိုက်ချင် သလိုလို … ဘယ်လိုကြီးမှန်းမသိပဲ အီလည်လည်ကြီး ခံစားလိုက်ရ၏။ ” ဟူးး မလွယ်ပါလား ခင်ထွေးရယ် ” . ရေမွှေးနံ.အကောင်းစားလေး နှာခေါင်းထဲဝင်လာသည်။ ပြီးတော့ .. စံပယ် … စံပယ်နံ.မွှေးမွှေးကြူကြူလေး ..။
” အစ်ကိုစိုး .. မုန်.စားမဆင်းဘူးလား ” ” အော် .. အေး .. စာရေးစရာရှိလို. ” ” ရည်းစားစာလားဟင် ” ” ရည်းစား စာမဟုတ်ဖူးဟေ့ .. ကဗျာ ဗျ ..ကဗျာ ” ” အံမယ် .. ကြီးကျယ်လိုက်တာ .. ပြပါဦး ” ” သွားစမ်းပါဟာ .. ပြီးမှဖတ် .. မဆုံးသေးဘူး ” ” ပြီးသလောက်ပဲကြည့်မယ်လေ .. လှန်ပြစမ်းပါ ” ” ဟာ .. ဒီကောင်မလေး .. ဇွတ်ပဲ .. ဖယ်စမ်းပါ ” အောင်စိုး လက်ဝါးနှင့်အုပ်ထားသော ဗလာစာအုပ်ကို အတင်းဆွဲဖယ်ပြီး ရေးလက်စ ကဗျာကိုဖတ်သည်။ ” အပွင့်သေးသေး … မမွှေးရက်ဖူး .. သူများခူးလဲ .. ရွှင်မြူးစွာလျှင် .. ငါမမြင်ချင် .. ငါ့ရင်ခွင်မှာ … ကဗျာက တို.လို.တွဲလောင်းကြီးဖြစ်သည်။ မဆုံးသေး … ” ငါ့ရင်ခွင်မှာ ဘာဖြစ်လဲအစ်ကိုစိုး … ဆက်ရေးလေ ” ” နေစမ်းပါဦးဟာ .. ကာရန်ရှာမရ ရတဲ့အထဲ ” တင်လှကြီးနှင့် ဝေလင်းကျောင်းစာသင်ခန်းထဲဝင်လာသည်။ ” အလဲ့ .. ကဗျာရေးနေသလား.. အင်း .. ဘာတဲ့ ” ကဗျာကို ပြိုင်တူဖတ်သည်။ ပြုံးကြသည် ။ ဝေလင်းက ” ငါဆက်ရေးမယ် … ကြည့် ” ဟုဆိုကာ … ငါ့ရင်ခွင်မှာ… အီအီးပါလျှင် … ငါပင်ဆေးကျောရလိမ့်မည်… ” ဟာ .. သွားပါပြီ .. ပျက်ပါပြီကွာ ” အောင်စိုး ထအော်သည်။ အငယ်က ခွက်ထိုးခွက်လှန်လေး လက်ခုပ်လက်ဝါးတီးကာ အူနှိပ်ပြီးရယ်သည်။ ဝေလင်းကဘောပင်ပစ်ချပြီး ထွက်ပြေးသည်။ တင်လှကြီးက ကဗျာစာရွက်ကို ယူကာထွက်သွားသည်။ ” ဟေ့ကောင် .. ဘယ်ယူသွားဦးမှာလဲ ” ” နံရံကပ်စာစောင် ဘောမှာသွားကပ်ပေးမယ်လေ … ဟား ဟား ” ပြောပြောဆိုဆို တင်လှကြီးကထွက်ပြေးသည်။
” နင်လာရှုပ်လို. .. သွား .. နင် သာသနာဖျက် ” ” ဟင် အငယ် သာသနာဖျက် .. ဟုတ်လားဟင် အစ်ကိုစိုး ” ” ဟုတ်တယ် .. နင် ” အောင်စိုးစကာများတန်.သွားရပ်သွားကြရသည်။ မျှော်လင့်မထားပဲ အငယ်မျက်ရည်များ ပိုးပိုးပေါက်ပေါက်ကြီးကျလာသည်။စာရေးခုံကိုထောက်ထားသောလက်ကလေးအစုံက တသိမ့်သိမ့် လှုပ်ရမ်းကာ အသံမထွက်ပဲငိုလေသည်။ ” ဟောဗျာ … ဒါလေးပြောတာ … နင်ကဘာဖြစ်ရတာလဲ ” ” သူများပြောတာ အငယ်ခံနိုင်တယ် … အစ်ကိုပြောတာအငယ်ခံလို.မရဘူး … သိလား … အစ်ကိုပန်းနဲ.ပေါက်လဲ အငယ်နာမှာပဲ …သိရဲ.လား ” စောက်ကျိုးနဲ … စကားကြီးတွေ အငယ်ပြောရဲနေပြီ။ မျက်ရည်အပြည့် မျက်လုံးကြီးများဖြင့် စူးရဲရဲ ကြည့်ကာ ပြောနေပုံက စိတ်ထိခိုက်မှုကို ဖော်ပြနေကြလေသည်။ ” ကဲ .. ဒါဆိုလဲ … နောက်ကို အစ်ကိုမပြောတော့ဘူး .. နော် .. တိတ်ပါ ညီမရယ် … ကျောင်းသားတွေမြင်ကုန်ရင်ပြောစရာတွေဖြစ်ကြဦးမယ် .. တိတ်တော့ နော် ” ” ခုမှ လာမချော့ပါနဲ့.. သူများကို သာသနာဖျက်လို.ပြောပြီးမှ .. ဟွန်း ” ကိုင်း … မရွှေငယ် .. ချာကနဲ လှည့်သွားပြန်တော့ မျှစ်စို.ပေါက်ကြီးလိုဖွံ.ထွားဝိုင်းဝန်းတဲ့တင်ပါးကြီးနှစ်လုံး က ခင်ထွေးကဲ့သို.ပင် အောင်စိုးက သရော်သွားပြန်ပါပြီ။ ရာသီတွေထဲ၌ အောင်စိုး ဆောင်းကိုချစ်သည်။
ဆောင်းချစ်သော မိန်းကလေးများနှယ် ဆောင်မှာပွင့်သော ပန်းများကိုလည်းအောင်စိုးယုယ မြတ်နိုးတတ်သည်။လေးလေး စည်းကမ်းတကျခိုင်းစေမှုကြောင့် နံနက် မိုးမလင်းမီ အောင်စိုးကျန်းမာရေးလေ့ကျင့်ရသည်။ပြီးမှ ပန်းချိုးရသည်။ ဂန္ဓမာခင်ထဲမှ အေးစက် စိမ့်ကျင် နေသော နှင်းစက်များက ဆွယ်တာအင်္ကျီအဖျားပိုင်းကို စိုစွတ်ကြသည်။ဝေ့ဝေ့ ၀ဲဝဲကျနေသော နှင်းတို့ က နံနက် ၈ နာရီခွဲအထိ မကွဲမစင် …အတော်အတန်မြင့်နေပြီဖြစ်သော နေလုံးကို နှင်းတွေကြား၌ ရေးရေး မြင်ရတတ်၏။ ခြံ အလည်ကျောနှင့် လက်ဝဲဘက်ထောင့်၌ ဘတ်ကူးထားသော နှင်းဆီတန်းကြီးများ ရှိသည်။ ခြံနောက်ဖက်၌ ဒူးဆစ်သာသာစံပယ်တန်းကြီးများဖွေးဖွေးလှုပ်ပွင့်နေကြ၏။ ဘာမှန်းလဲမသိ … စံပယ်နံ.ရလျှင် အငယ့်ကိုသတိရသည်။ ဂန္ဓမာနံ.ရလျှင် ခင်ထွေးကိုသတိရသည်။ခွေးချေးနံ.နံလျှင် ဝေလင်းကိုသတိရတတ်သည်။ အတွေးများမရေမရာနှင့် ပန်းညှပ်ကပ်ကြေးဖြင့် နှင်းဆီများကို ညှပ်ရင်း တစ်ဆုပ်ပြီး တစ်ဆုပ် မြေမှာ ပုံ၍ ချထားခဲ့သည်။
” လွှတ် … လွှတ်ပါ .. ဦးလေးရယ် … လွှတ်ပါ ” မြင်ကွင်းကကြည်လင်နေပါသည်။ နှင်းမဖုံးပါ။ ခင်ထွေးနှင့်လေးလေး အပေါ်စီးမှ ခင်ထွေးကို ခွထားသည်။ တွဲလောင်းကြီးကျနေသောလိင်တန်မဲမဲကြီးက အကျည်းတန်ရက်စက်မည့်ဟန်ကို ဆောင်နေ၏။ အောင်စိုး ကျောက်ရုပ်ကြီးနှယ် ငြိမ်သက်သွား၏။ ထာဝစဉ်တည်တန်.ခဲ့သော အိနြေ္ဒသိက္ခာ ပြည့်ဝခဲ့သောလေးလေး အဘယ်ကြောင့်မဖွယ်မရာအမှုကို ပြုလေဘိသနည်း။ ခင်ထွေးခြေနှစ်ချောင်းကို ကွေးကောက်ရုန်းကန် ရှာသည်။ထမီလေးက တစ်ခါတစ်ရံ ဟောင်းလောင်းလေးဖြစ်သွားပြီး .. ပေါင်တံညိုညိုကြီးများကြားမှ မရေမရာ မသဲမကွဲမဲကနဲ .. မဲကနဲ မြင်နေရသည်။ ” ငြိမ်ငြိမ်နေစမ်းပါ ခင်ထွေးရယ် … နင့်ကိုငါယူမှာ ပါ ” ” ဟင့်အင်း ဟင့်အင်း … ခင်ထွေးကြောက်တယ် .. ဟင့်အင်း ” ” နင် ငါ့ကိုယူရင် .. ဒီခြံလဲ နင်ပိုင်မှာ … သိရဲ.လား ” ခပ်ပေါပေါ ခပ်သွပ်သွပ် စည်းရုံးရေးစကားကြီးကို လေးလေးပြောနေသည်မှ ဟုတ်ပါလေစဟု စိတ်၌တွေးမိ၏။ ကသုတ်ကယက်မြင်ကွင်းက အောင်စိုးရင်ကို တဒိန်းဒိန်းခုန်စေသည်။ ဆောင်းနံနက်ခင်း၏ ထုံသင်း မွှေးကြိုင်သော ပန်းရနံ.တို့ သည် လွင့်ပျက်ပျယ်သွားကြသည်။
အေးချမ်းငြိမ်သက်ခြင်း ခံစားမှုအစား အကျည်းတန် အဓမ္မဆန်သော မြင်ကွင်းက အစားထိုးဝင်ရောက်လာသည်။အောင်စိုးလက်ထဲမှ ပန်းညှပ် ကပ်ကြေးလေးကို တချပ်ချပ် ညှပ်နေမိသည်။ စိတ်တွေလှုပ်ရှားလွန်းလှသည်။သနားစဖွယ် ရုန်းကန်အော်ဟစ် နေရှာသော ခင်ထွေးကို ပသို. ကူညီရပါမည်လည်းဟု စိတ်အစဉ်က အပြေးအလွှား စဉ်းစားလျက်ရှိသည်။ လေးလေးက သန်မာထွားကြိုင်းသမျှ စစ်ပြန်ပီပီ လည်း စိတ်မြန်ကိုယ်မြန်ရှိသူဖြစ်သည်။ လေးလေး … အား. ခင်ဗျား မတရားမလုပ်နဲ. …ဘာညာဆိုပြီး ၀င်ရောက်လူစွာလုပ်ဖို.ဆိုသည်က အောင်စိုးအိပ်မက် တောင် မမက်ရဲသော ကိစ္စတစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ ခင်ထွေး ကျားခံတွင်းဝ၌ သွေးသံရဲရဲဖြင့် လူးလွန်.နေရှာသော သားကောင်လေးပမာ သနားစရာ ကောင်းနေသည်။စစ်စွပ်ကျယ် ဂျိုင်းပြတ်ကိုသာ ၀တ်ထားသော လေးလေး၏ လက်မောင်းကြွက်သား ကြီးများက အမြောင်းလိုက် ဖုထစ်ကြွရွနေသည်။ကြီးမားတုတ်ခိုင်သမျှ အလေ့အကျင့် အပြည့်အ၀ရရှိ ထားသော ပေါင်လုံးကြီးများကလည်း မာကျောကျစ်လျစ်လှသည်။ခင်ထွေး၏ ဖြူနုဖွေးလျသောလက်ဖ၀ါးလေး အစုံက လေးလေး၏ ပေါင်ကြီးများကို ကိုင်ထား၏။ မျက်နှာဝိုင်းဝိုင်းလေးကို ဘယ်ညာ အဆက်မပြတ် ရမ်းခါရင်း အားအင်အစွမ်းကုန်ဖြင့် ရုန်းကန်နေသည်။သန်မာထွားကြိုင်းလှသော လေးလေးလက်ချောင်း ကြီးများက ခင်ထွေး၏ လုံးဝန်းပြည့်တင်းသော ပုခုံးလေးနှစ်ဖက်ကိုကျစ်ကျစ်ပါအောင်ဆုပ်ထားသည်။
လိင်တန်မဲမဲကြီးကို ခင်ထွေး မကြည့်ရဲ … တစ်ခါတစ်ခါ မြင်ကွင်းထဲ၌ ကျက်သရေမဲ့စွာမြင်လိုက်ရတိုင်း ခင်ထွေးတစ်ကိုယ်လုံး သွေးများပွက်ပွက်ဆူကုန်သည်။ ” ရှင် .. ခွေးကျင့်ခွေးကြံ မကြံနဲ… လူယုတ်မာ ” ခင်ထွေး အသက် ၂၃ နှစ်ဝန်းကျင့်၌ လူတကာနှင့် တန်.တည်ခိုင်ကျည်စွာ နေလာခဲ့သူလေးဖြစ်သည်။ မထိတထိ ရိတိတိ လုပ်လာလျှင်လည်း ပါးဆွဲရိုက်ရဲသော သတ္တိက အပြည့်ရှိသည်။ ယခုဟာက … စံပယ်ခင်းသွားကြည့်ရအောင်ဟု လိမ်လည်ခေါ်ယူလာပြီးမှ ယခုကဲ့သို. အဓမ္မပြုကျင့် ခြင်းဖြစ်သည်။ လေးလေးအသက် ၄၀ ကျော်ပြီ။ စိတ်ထားမှန်မှန်ဖြင့် ခင်ထွေးတို.ပန်းဖောက်သည်များကို ဆက်ဆံ လာခဲ့သည်မှာလည်းလေး ငါးခြောက်နှစ် လောက်ရှိနေပြီ။ လေးလေးသည်နှယ် ယုတ်မာပက်စက်လိမ့်မည်ဟု ခင်ထွေး ထင်မထားခဲ့ချေ။ကျားသတ္တ၀ါကို သွားဖြဲကြည့်မိသော ခင်ထွေးတို့ လို မိန်းကလေးများ အယုံလွယ်မှု ရလဒ်က နောက်ဆုံး သည်သို.သာဖြစ်တတ်သည်ကို ခင်ထွေးမသိခဲ့ပေ။ ခင်ထွေးရင်တွေ လှိုက်၍ လှိုက်၍ မောလာသည်။ မျက်လုံးတွေ၏ အကြည်မြင်စွမ်းအားများလည်းေ၀၀ါးလာသည်။ပါးနှစ်ဖက် နဖူးနှင့် ပေါင်သားများက နှင်းစက်တို.၏ အေးမြခြင်း အထိအတွေ.ကို ရယူခံစားနေရမှန်းခင်ထွေးသိသည်။ သို.သော် ချွေးစီးများ စို.ထွက်လာနေသည်။ ဒေါသစိတ် ရှက်စိတ်များဖြင့် ရုန်းကန်တွန်းထိုးရင်း လူမဆန် လွန်းသော လေးလေး၏ လီးကြီးကို ခင်ထွေးမြင်နေရ၏။ ထိပ်က ပွင့်အာပြဲလန်နေပြီး ဒစ်အထက်ကို အလိပ်လိုက်ကြီး တမင်ဖြဲထားသလိုရဲရဲနီနေသည်။
လီးအရင်းအုံ၌ မဲနက်လိမ်ကောက်နေသော အမွှေးကြမ်း ကြီးများက နက်မှောင်ပြစ်ခဲနေ၏။ အတော်ကြီး တွဲလောင်ကျနေသာ ဂွေးဥ ကြီးဝယ် အမွှေးရှည်ကြီးများက ထိုးထိုးထောင်ထောင် ပေါက်နေသေး၏။ ပုဆိုးကို ဂွင်းလုံးချွတ်ထားသဖြင့် ဖင်ကြီးနှစ်ခြမ်းကြားမှ မဲမှောင် သော ဖင်မွှေးကြီးများကိုလည်းရွံရှာဖွယ်တွေ.နေရသည်။ ဆီးခုံမှ မဲမဲမှောင်မှောင် ပေါက်ရောက်နေသော အမွှေးများက ဗိုက်သားအထက် ချက်အထိ ကြမ်းထော်စွာနေရာယူထား၏။ ရင့်မာကြမ်းတမ်းသော အသက် ၄၀ ကျော် လေးလေး၏ လီးကြီးက အသက် ၂၀ ကျော်ခင်ထွေး၏ စောက်ပက်လေးကို လိုးရန်အာသီသတွေ ပြင်းထန်နေပုံရသည်။ တင်းတင်းမာမာကြီးက ခင်ထွေးစိတ်များကစင့်ကလျားပြိုကွဲစေရန် ခြိမ်းခြောက် နေသည်နှင့်တူလှသည်။လေးလေး၏ လက်များက ခင်ထွေး ထမီ အထက်ဆင်စလေးကို ဆတ်ကနဲ.ဆွဲဖြုတ် သည်။ ထမီ အောက်စမှ ၀ုန်းကနဲဆွဲချွတ်သည်။ခင်ထွေး ကာကွယ်ဟန်.တားရန် အချိန်လုံလောက်စွာမရ လိုက်မီ ကလေးမှာပင် ခင်ထွေးထမီကျွတ်ခဲ့ရလေသည်။ သားကောင်ရနံ.ကိုရသော ကျားရဲကြီးအလား လေးလေးမျက်လုံးကြီးများ ၀င်းလက်တောက်ပလာသည်ကို ခင်ထွေးတွေ.ရသည်။လေးလေးနှုတ်မှ တဟင်းဟင်းညည်းတွားသံကြီးကိုလဲ တော်လည်းသံ မြေပြိုသံ အလား ကြောက်မက်ဖွယ် ကြားလာရ၏။လေးလေးနှာခေါင်းမှ မှုတ်ထုတ်လိုက်သော လေပြင်းပူပူကြီးများက ခင်ထွေးမျက်နှာကို နံစော်စွာ ရိုက်ခတ်မိသည်။ခင်ထွေး မျက်ရည်များအလိုလိုလိမ့်ဆင်းကျလာသည်။
ကောင်းရောင်းကောင်းဝယ် ပန်းရောင်းစားရင်း မိမိအပျိုစင် ဘ၀လေးကို သိုသိပ်ကျစ်လျစ်စွာထိန်းသိမ်းခဲ့သော ခင်ထွေးအတွက် ရမက်ပြင်းသော လေးလေးလက်၌ ခြေမွခြင်း ခံရပြီ။အားနည်းလာသည်။ ငြိမ်သက်နေသော ခြံကြီးက အားပေးအားမြှောက်ပြုသလို နှင်းတွေပိတ်ကျလာပြန်၏။ တစ်ချက်တစ်ချက် နွေးကနဲ ပူကနဲ ခင်ထွေး ဗိုက်သားနုနုလေးများ ပေါင်ရင်းများကို လီးထိပ်ကြီးနှင့် ထောက်မိလေတိုင်းကမ္ဘာပျက်သည့် အလား ခင်ထွေး အာခေါင်ခြစ်ပြီးအော်ပါသည်။ သို.သော် လူသူဝေးသောခြံကျယ်ကြီး အတွင်း ကယ်တင်မည့် သူရဲကောင်းသည် ဘွားကနဲပေါ်မလာ။ ” အား … လွှတ် လွှတ်… ခွေးကြီး .. လူယုတ်မာ … အား ” ခါးကိုလိမ်စောင်းရင်းရမ်းခါ ပစ်သည်။ လက်နှစ်ဖက်က ခင်ထွေးပုခုံးကို ချုပ်ကိုင်ထားရသဖြင့် လီးကလိုရာ မရောက် ။ပေါင်များ ဆီးခုံများ ဗိုက်များ ကိုသာထိုးမိနေသည်။ လေးလေးအံကြိတ်ရင်းလိမ်ညှပ်ထားသော ခင်ထွေးပေါင်ကြားမှအပျိုစင် ပါကင်ပေါက်လေးကို သူ.လီးကြီး ထိုးထည့်ရန် အစွမ်းကုန်ကြိုးစားနေသည်။ ဒေါသကြောင့်ကိုင်ထားသောလက်ကြမ်းကြီးများက ပို၍နာကျင်လာသည်။ ဒက်ဖနီ အမျိုးအစား နှင်းဆီခင်းမှ လွင့်ပျံဝေ့၀ဲလာသော နှင်းဆီ ရနံ.လေးက မြောက်လေနှင့်အတူ ခင်ထွေးနှာဝသို.သင်းသင်းမွှေး၏။ ရုတ်ချည်းအင်အားလေးများသစ်လာသည်။ ခေါင်းများကြည်လင်လာပြီး ခွန်အားများပြည့်ဝသလိုလည်း ခံစားလိုက်ရ၏။ ” ကဲ … ဟယ် ” ” အားးး ” ခင်ထွေး ခြေနှစ်ချောင်းကို ကွေးယူပြီး လေးလေးဂွေးဥကြီးကိုစုံကန်ထည့်လိုက်ရာ လေးလေးမျက်လုံးကြီးပြူးပြီး အားကနဲ အော်ကာဂွေးစီကို လက်နှစ်ဖက်နှင့်အုပ်ရင်း လဲကျသွားသည်။
စက္ကန်.၀က်လေးသည်လည်း ထိုအချိန်၌ခင်ထွေးအတွက် ရွှေတပိဿာမျှ တန်ဖိုးရှိနေသည်။ လျင်မြန်စွာ လူးလဲထပြီး ထမီကို ကောက်ယူပြီး ထပြေးသည်။ တဒိတ်ဒိတ်ဆောင့်ထိုးနေ သော နှလုံးသွေးများ၏ ပြင်းထန်စွာလှုပ်ရှားမှုကြောင့် အောင်စိုးရင်မှာ ကွဲမတက်မောနေသည်။ ကွေးယူမြှောက်လိုက်သော ခင်ထွေးပေါင်နှစ်လုံးကြားမှ ကြာဖူးလေးအလား ပြည့်ဖောင်းစူမို.နေသော စောက်ပက်လေးကို ထင်ထင်ရှားရှားကြီးမြင်လိုက်ရသည်။ ကုန်းထသော တဒင်္ဂ ကွတတအခြေအနေ လှုပ်ရှားမှု အစိတ်အပိုင်းတကဒ်စီကို မျက်ဝန်းထဲ၌ ဓာတ်ပုံများအလား စွဲထင်ကျန်ရစ်သည်။ မိမိအသက်သွေးကို အူယားဖားယားကာကွယ် လှုပ်ရှားပြေးထွက်သွားသောခင်ထွေးကမူ အောင်စိုးအားမြင်မသွားပါ။ ပေ ၂၀ ခန်.သာ ဝေးသောစံပယ်ခင်းအလယ်မှ အဖြစ်အပျက်ကို အောင်စိုး မျက်ဝါးထင်ထင်တွေ.လိုက်ရခြင်းဖြစ်သည်။ဂွေးတင်နေသော လေးလေးကိုလည်းစိတ်ချဉ်ချဉ်နှင့် ကူညီဖေးမ မနေတော့ဘဲ အောင်စိုးလှည့်ပြန်ခဲ့သည်။
ယနေ.ကျောင်းတက်ရသည်မှာ တစ်မျိုးကြီးဖြစ်နေသည်။တင်လှကြီးနှင့် ဝေလင်းတို.က ဘောဂဗေဒ တွက်နေကြ၏။ဆရာမ မလာသဖြင့် အတန်းတွင်း၌ ကျွက်စီ ကျွက်စီ လေးခပ်တိုးတိုးတွတ်ထိုးနေကြသည်။ အောင်စိုး ဘာစာအုပ်မှန်းမသိသော စာအုပ်တစ်အုပ်ကို စားပွဲပေါ်ဖွင့်ထားကာ မမြင်ရဘဲ ငုံ.ကြည့်နေပြီး ငြိမ်သက်နေမိ၏။ ” မော်နီတာ .. မပြောတော့ဘူးလား ” ခပ်စွာစွာ အမာစိန်အသံက စူးကနဲ ထွက်လာသဖြင့် ခေါင်းကိုမော့ကြည့်လိုက်သည်။ အတန်းတွင်း၌ ခပ်ကဲကဲ စိန်ကုလားတစ်ယောက် ပို.စ် အမျိုးမျိုးနှင့် စတိတ်ပေါ်၌ ကနေသည်။ ” စိန်ကုလား .. ငြိမ်ငြိမ်နေစမ်းကွာ .. ဟိုဘက်အတန်းကပြောဦးမယ် … မင်းကလဲ ” ” ပြောပြောပေါ့ဟ .. ဆရာမ မလာလို.ကစားတာပဲ ” ” ဘာကွ .. မင်းအရွယ်က ကမြင်းရမဲ့ အရွယ်လား ” ရုတ်ချည်း ရန်ပွဲအသေးစားလေးဖြစ်ရန်တာစူသွားသည်။ ” အစ်ကိုစိုး … ဖက်ဖြစ်မနေနဲ. ” ဘယ်အချိန်က အနားရောက်လာမှန်းမသိသော အငယ်က အောင်စိုးလက်မောင်းကိုဆွဲရင်းတိုးတိုးလေး သတိပေး၏။ ” ဟဲဟဲ .. လူဆိုတာ နိုင်တဲ့လူတော့ရှိတာပဲ နော် ” စိန်ကုလားက ပြောင်စပ်စပ်ဖြင့် ကလိလိုက်သည်။ ဝေလင်း ခုံမှ ရုန်းကန်ထသွားသည်။ ” ဟေ့ကောင် စိန်ကုလား … မင်းမျက်နှာခွေးချီးအသုတ်ခံချင်လို.လား ” ” အာ ဟာ .. ဝေလင်းရယ် … တစ်တန်းထဲသားတွေပါကွာ .. မရက်စက်ပါနဲ. ” စိန်ကုလားကပြာကယာနေရာ၌ ပြန်ထိုင်ပြသည်။
” အေး .. မော်နီတာ စကားကိုနားမထောင်တဲ့ကောင်တွေ နောင်ကိုမျက်နှာကို ခွေးချီးနဲ. သုတ်မယ် … မှတ်ထား ” ဝေလင်းက ကြိမ်းဝါးပြသည်။ အချို.က မချိုမချဉ် မျက်နှာဖြင့်ဝေလင်းကိုကြည့်ကြသည်။ ” မလုပ်နဲ. .. သူက ခွေးချီးတကယ်ကိုင်ရဲတာ ” ဝေလင်း၏ ခွေးချီးလက်နက်ကြောင့်တစ်တန်းလုံးငြိမ်သွား၏။ စိန်ကုလား တစ်ယောက်သာ မကျေမနပ်မျက်နှာဖြင့်အငယ့်ထံသလို.တစ်လှည့် … အောင်စိုးကိုတစ်လှည့်ကြည့်နေခဲ့သည်။. ” ဟေ့ကောင် … ကြာကူလီ ” စိန်ကုလားအသံ .. သူ.ဘေးမှာက လူမိုက်ဂိုက်ဖြင့်စီးကရက်တစ်လိပ်ကို နှုတ်ခမ်းထောင်၌ ခဲလျက် မထီတထီ ကြည့်နေသောပက်ထရစ် …အငယ့် မျက်ဝန်းလေးစူးရှ တောက်ပသွားသည်။ ” နင်ဘာစကားပြောတာလဲ စိန်ကုလား ‘ ” ဟဲဟဲ … နင်နဲ.အောင်စိုးအခြေအနေ နင်တို.အသိဆုံးပါ ” စိန်ကုလားက ခပ်ဟားဟားလေးပြောရင်းမဲ့ပြသည်။ ” ဘာဖြစ်ဖြစ်ပါကွာ … စောက်ကြောင်းမဟုတ်ပါဘူး .. ငါက မလိုချင်လို. စွန်.ထားတဲ့စော်ပဲဟာ .. ဟဲဟဲ ” ” ဟင် … ပက်ထရစ် .. ခွေးသား ” အောင်စိုးသည် တစ်ကြိမ် ခြေဖြင့်တိုက်ခိုက်လိုက်သည်။ လုံးဝမျှော်လင့်မထားသော ကန်ချက်ကမြင့်သည် ပြင်းသည် ။ပက်ထရစ်ပါးစပ်ဖျားမှ စီးကရက်လမ်းဘေးရောက်သွားသည်။ ဖြာကနဲ ကွဲဆင်းလာသောသွေးတို.က မေးစေ့သို. စီးကျ၏။ပက်ထရစ် နောက်သို.သုံးလေးလှမ်းယိုင်ဆုတ်သွားသည်။ ” အားလား … ပြင်းသားပဲ .. ဟင်ဟင်း ” အလေ့အကျင့်ပြည့်ဝသော ပက်ထရစ်လက်သီး တံတောင်နှင့်ဒူးများက အောင်စိုးခန္ဓာကိုယ်အနှံ.အပြားသို. တစ်ချက်ကလေးမှမတိမ်းမချော်ပဲ တိုက်ရိုက်ချည်းထိသည်။ အောင်စိုး ပုံလျက်သားငြိမ်သွားသည်။ စိန်ကုလားက လက်နှစ်ဖက်ကို ပွတ်သပ်နေသည်။ ” ဖွတ် … အာပလာပဲ … ငါတောင် တစ်ချက်မှမ၀င်လိုက်ရဘူး ” စိန်ကုလားနှင့် ပက်ထရစ်အောင်မြင်စွာထွက်ခွာသွားကြသည်။ အောင်စိုး မျက်ခုံးကွဲသည်။ မေးစေ့ ယောင်သည်။နှုတ်ခမ်းကြီးဖူးပြီး ထော်နေသည်။ မျက်ကွင်းတစ်ဖက်ညိုသည်။ ” တောက်… မအေလိုးတွေ” ဝေလင်းနှင့် တင်လှကြီးရောက်တော့ ပွဲကပြီးနေပြီ .. ဝေလင်းအိမ်ကနီးသဖြင့်အောင်စိုးကို ဝေလင်းအိမ်သို. တွဲခေါ်ခဲ့ကြသည်။
အငယ်သည် ငိုသည် .. ရှိုက်၍ငိုသည်။ ကျောင်းက ညနေ ၅ နာရီလွှတ်သည်။ ရန်ပွဲအပြီး ဝေလင်းအိမ်အထိရောက်တော့၆ နာရီထိုးပြီးနေပြီ။ ဆေးလိမ်း .. ကြပ်ပူတိုက်နှင့် ၇ နာရီနီးပါး ဖြစ်သွားသည်။အငယ် အောင်စိုးအနားမှ တဖ၀ါးမှမခွာ… ” နင် .. သိပ်မိုးချုပ်နေပြီ …အငယ် ” ဝေလင်းက သတိပေးသည်။ တင်လှကြီး က ဝေလင်း အမေနှင့်ဈေးလိုက်သိမ်းပေသည်။ “အစ်ကိုမှ သတိမရသေးလာ ဝေလင်းရယ် .. ငါမပြန်ချင်သေးဘူး .. ငါ့ကြောင့်ဖြစ်ရတာဟ ” ” အေးလေ … နင့်အိမ်က တလွဲထင်ကုန်မှာ ” ” ထင်ချင်ရာထင်ပစေတော့ဟာ ” အောင်စိုးသတိရလာတော့ ည ၈ နာရီထိုးပြီးသွားခဲ့ပြီ ။ ” အစ်ကို … သတိရပြီလားဟင် ” ” ဟင် .. အငယ် .. အိမ်မပြန်သေးဘူးလား … မိုးချုပ်နေပြီပဲ ” ” ရပါတယ် … အငယ်အိမ်ကို ရှင်းပြနိုင်ပါတယ် .. အစ်ကို ” ဝေလင်း .. တင်လှကြီးနှင့် ဝေလင်းအမေတို.ဈေးဆိုင်သိမ်းရန်လမ်းထိပ်သို.သွားနေကြသည်။ ကျဉ်းမြောင်းသော ဝေလင်းအိပ်ခန်းလေးထဲ၌ အငယ်နှင့်အောင်စိုးတို.နှစ်ဦးသာရှိ၏။ မှုန်ပျပျ မီးအိမ်လေးက အိမ်ရှေ.ခန်းတွင် လေတ၀ူးဝူးကြား၌ မှိန်သွားလိုက် … လင်းလာလိုက် ….။ ” အငယ် … ပြန်တော့နော် ” ” ဟင့်အင်း .. အစ်ကို. ကိုပဲပြုစုနေချင်တယ်ကွယ်” ” ခက်လိုက်တာ ကလေးရယ် ” ပက်လက်အိပ်နေသော အောင်စိုးရင်ဘတ်ပေါ်သို. အငယ်က ပါးလေးအပ်ပြီး မှောက်အိပ်လိုက်သည်။ ပြင်းပြစွာလှုပ်ရှားနေသော အောင်စိုးရင်ခုန်သံကို အငယ်ကြားနေရသည်။ အငယ့်စိတ်များ လှုပ်ရှားလွန်းလှသည်။ အငယ့် လက်ကလေးတစ်ဖက်က အစ်ကို.ရင်ဘတ်ကို တယုတယလေးပွတ်သပ်ပေးနေသည်။ ထိုမှ ဆင်းလျှောကျလာကာ ဆီးစပ်ရှိ အမွှေးများကို ပုဆိုးပေါ်မှ ပွတ်သပ်၏။ ” အငယ် … အစ်ကို ရဟန္တမဟုတ်ဖူးနော် ” ” အငယ်လဲ အုတ်နီခဲမဟုတ်ဖူးလေ အစ်ကို ” အသံလေးများက လှိုင်းထပုတ်ခါနေကြသည်။ အောင်စိုးလက်အစုံက နွေးထွေးအိစက်နေသော အငယ့်ကိုယ်လုံးလေးကို ရစ်သိုင်းဖက်ပွေ.လိုက်သည်။ အငယ့်ရင်ထဲ လေအပင့်ခံရသော ရွက်ဝါလေးနှယ် လှိုက်ကနဲလွင့်မျောသွားသလို ခံစားလိုက်ရသည်။ အစ်ကို.လက်တစ်ဖက်က အငယ့်တင်ပါးလုံးလုံးလေးကို အုပ်ကိုင်ပွတ်သပ်ပေးရင်း ဆုပ်နယ်သည်။
” ချစ်တယ် … အငယ် ” အစ်ကို.အသံက အစ်တစ်တစ် .. တစ်ဆို.ဆို. .. ဝေေ၀၀ါးဝါး … ” အငယ်လဲ အစ်ကို.ကို ချစ်တယ် သိလား ” အမှောင်သည် သာ၍နက်ရှိုင်း မှုန်ရီလာသည် ။ အစ်ကို.ရင်ဘတ်ပေါ်သို. အငယ်လှိမ့်တက်လိုက်သည်။ တစ်ယောက်မျက်နှာကိုတစ်ယောက်စေ့စေ့မကြည့်ရဲကြ။ မျက်နှာနှစ်ခုက အံလွဲလေး လိမ်ယှက်ထား၏။ ခေါင်းအုံးမှ မှိုနံ.ကို အငယ်ရှူရှိုက်မိသည်။ အစ်ကို ပေါင်နှစ်ဖက်ကို ဘေးသို.ကားလိုက်သည်။ မာတောင်သော အချောင်းတစ်ခုက အငယ့်စောက်ပတ်လေးကို ထောက်မိသွားသည်။ အငယ်က တဆတ်ဆတ် တုန်ရီလာသည်။ ” အစ်ကို ” ” ဘာလဲ .. အငယ် ” ” အငယ် .. ရှက်တယ်ကွယ် ” အငယ်က အစ်ကို.နားဝ၌ တိုးတိတ်ညင်သာစွာလေးဆိုသည်။ အစ်ကို.လက်များက တရွရွလှုပ်ရှားလာသည်။ အငယ့်ထမီအောက်စလေးလန်တက်သွားသည်။ ” အစ်ကို .. အငယ်ရှက်တယ် .. ဆို ” အစ်ကို.ထံမှ တုံ.ပြန်စကားသံထွက်မလာ .. အငယ့် ဒူးလေးနှစ်ဖက်က ကြမ်းပြင်ကိုခပ်ကားကားလေးထောက်မိထားရာ ပေါင်လေးနှစ်ဖက် အလိုအလျောက်ကားထားသည့်နှယ် အနေတော် အနေအထားကိုရောက်နေသည်။ အစ်ကို.အသက်ရှူသံက အထစ်ထစ် အငေါ့ငေါ့ ပြင်းထန်လာ၏။ အလားတူ အငယ်နှာဝမှ မှုတ်ထုတ်ရှူရှိုက်နေသော လေသံများကလည်း မူမမှန်တော့ .. ဖားဖိုနှစ်လုံး အပြိုင်ထိုးနေသည့်နှယ် လေပူလေးများ မှုတ်ထုတ်နေကြသည်။ အစ်ကိုက အငယ်နှင့် အစ်ကိုတို.နှစ်ဦး၏ ဗိုက်သားနှစ်ခုကြားသို.လက်ကိုလျှိုသွင်းပြီး အငယ့်စောက်ဖုတ်လေးကိုစမ်း၏။
” အား… အဟင့် … မကိုင်နဲ.ကွာ ” အငယ်က ယားတတ်သဖြင့်တွန်.လိမ်သွားလေသည်။ အစ်ကိုလီးက တင်းကျစ်မာကျောစွာမတ်ထောင်နေသည်။ လီးကို ခါးလယ်မှ ကိုင်ပြီး အငယ့်စောက်ပတ်လေးထဲသို.တေ့သွင်း ၏။ လီးနှင့်စောက်ပတ်အတွေ.အထိက ပူနွေးစိုစွတ်နေ၏။ နူးညံ့အိစက်ခြင်း.သွေးပွက်ပွက်ဆူကာ ဆောက်တည်ရာမရခြင်း ခံစားမှု တစ်ပေါင်းတည်းကို နှစ်ဥင်္းလုံးခံစားကြရ၏။ ” ပြွတ် .. ပြစ် .. အာ.. အဟင့် .. အဟင့် .. မ၀င်ဘူး ” အစ်ကို.လီးက ဘေးသို.ချော်ထိုးသည်။ အငယ်ကလွှတ်ကနဲပြော၏။ ” မ၀င်သေးဘူးလား .. အငယ် .. ဟင် ” ” ဟင့်အင်း ” အငယ်က အသက်အောင့်ပြီးဖြေသည်။ အစ်ကို.မျက်နှာကို လုံးဝမကြည့်ရဲ။ အသားများလည်း ဇိုးဇိုးဇက်ဇက် တုန်လို.နေသည်။ အလွဲလွဲအချော်ချော်နှင့်တော်တော်ဖြင့်မ၀င် … ” ကိုင်သွင်းပေးပါလား.. ဟင် ” ” ဟာ .. ဒုက္ခပါပဲ .. မကိုင်ရဲဘူး … အဟင့် ” ခန္ဓာကိုယ်နှစ်ခုကမြွေနှစ်ကောင်အရွေလိုက်သလို ပူးကပ်တွန်.လိမ်နေကြသဖြင့် လိုရာမရောက်ပဲ နှောင့်နှေးနေ၏။ အပြင်၌ ဆောင်းလေအေးအေးက ခပ်ညှင်းညှင်း တိုက်နေ၏။ ” ဝေလင်းတို.ပြန်လာရင် ဒုက္ခအစ်ကိုရဲ. ” အငယ်က မြန်မြန်ကိစ္စပြီးချင်သော အသံလေးနှင့်ပြော၏။ ” အငယ် .. ပက်လက်အိပ်ပေးပါလား ဟင် ” ” ဟင့်အင်း … အစ်ကို.မျက်နှာကို အငယ်မကြည့်ရဲဘူး ” အငယ်က တင်းတင်းကြပ်ကြပ်လေးဖက်ထားရင်းမှ ငြင်းဆန်နေပြန်သည်။ အောင်စိုး ထိုးကြိတ်ခံထားရသော ဒဏ်ရာများကိုမေ့ပျောက်နေသည်။ ဝေဒနာများကလည်း ပျောက်လွင့်နေသည်မှာ တကယ့်ကို အံ့သြစရာကောင်းလှသည်။
အောင်စိုးကအငယ်ကို ဖျာပေါ်သို.လှိမ့်ချလိုက်သည်။ ထိုအခါ ပင့်တင်ထားသော ထမီလေးကို အငယ်က အတင်းအဓမ္မ ဆွဲဖုံးပစ်လိုက်ပြန်သည်။ အောင်စိုးက အငယ့်ပါးပြင်နုနုလေးကို ဖွဖွလေးနမ်းသည်။ လည်တိုင်ဖွေးဖွေးလေးကိုလည်းညင်သာစွာ ပွတ်သပ်နမ်းရှုံ.လိုက်၏။ အငယ့်ထံမှ ဟင်းဟင်း ဟူသောငြီးတွားသံလေးပေါ်လာပြီး ငြိမ်ကျသွားလေသည်။ အောင်စိုးက မွေးရာပါကြီးကို အငယ့်ပစ္စည်းလေးထဲသို. အသာအယာလေး ဖိသွင်းချလိုက်လေတော့သည်။ ” ပြွတ် ..အ. … အမေ့ … အမလေး … အစ်ကိုရယ် ” သည်တစ်ချီ လီးက စောက်ပတ်ထဲသို. တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ကြီး ၀င်ရောက်သွားသည်။ နှစ်ဦးးလုံး ငလျင်လှုပ်သလို တုန်ခါလှုပ်ရမ်းသွားကြသည်။ တဒင်္ဂလေးမျှ သောအထိအတွေ.က ရာသက်ပန်မေ့မရနိုင်လောက်သော ခံစားမှုကို ပေးစွမ်းလိုက်လေသည်တကား…။ ” ပြွတ် … ပြွတ် .. စွတ် .. ပြွတ် .. စွတ် ” လူပျိုရိုင်းလေ၏ အညှောင့် .. အပျိုရိုင်းလေး၏ အကော့အလူးဗြောင်းဆန်အောင် ထိတွေ.ပွတ်တိုက်မိကြ၏။ သံ သံ ချင်းသာဆိုလျှင် မီးထတောက်လောက်သော ပွတ်တိုက်မှုမျိုးပင် ဖြစ်ချေသည်။ ယခုတော့ မီးတောက်အစား စိုစွတ် ပြစ်ချွဲသော အရေများက အင်္ဂါနှစ်ခုကြား၌ သဘာဝက ထုတ်လွှတ်ပေးလိုက်သောအခါ ပြွတ်ဟူ၍ လည်းကောင်း စွတ် ဟူ၍လည်းကောင်း အသံအားဖြင့် လွင့်စင်ပေါက်ကွဲထွက်လာသည်။
လှပနုနယ်သော အငယ့်ကိုယ်ခန္ဓာလေးမှာ ဘယ်လူးညာလှိမ့်ဖြင့် အကြိတ်အနယ် ခုခံကာကွယ်နေရသော ကာမတိုက်ပွဲ ကိုဆင်နွှဲနေသည်။ အောင်စိုး၏ ဖင်ကြီးကလဲ မြေကြီးထဲသို.နက်ရှိုင်းစွာရိုက်သွင်းနေသော ပိုင် ကြီးကဲ့သို. မှန်မှန်ကြီးဆောင့်သွင်းနေတော့၏။ ” ပွတ်.. ဖွတ် .. ပြွတ် .. ပွတ် .. စွတ် .. စွတ်.. ပွတ် ” အမွှေးပါးပါးလေးအုပ်လွှမ်းနေသော အငယ့်စောက်ပတ်ကို အောင်စိုးခိုးကြည့်သည်။ မဲမှောင်နေသော လီးမွှေးကြီးများက ဖြူလွ နုညံ့နေသော အငယ့်ဆီးခုံကို ပွတ်သပ်မိလေတိုင်း အငယ့်ခမျာ ကော့ပျံလူးလွန်သွားရှာသည်ကိုလည်း အောင်စိုးသတိထားမိလာသည်။ လီးကြီးကို ဆွဲနှုတ်လိုက်တိုင်း ရဲကနဲ .. ၇ဲကနဲ အပြင်သို.ပြူထွက်လာတတ်သော စောက်ခေါင်းအတွင်းသားလေးများမှာ နူးအိ ညံ့သက်လှကြောင်းလဲ အောင်စိုးစတင် သတိထားမိသည်။ မိန်းမစောက်ပတ်ကို ပထမဆုံးအောင်စိုးအနီးကပ်လေ့လာဖူးခြင်းဟုလည်း မိမိကိုယ်ကို သိလိုက်သည်။ အငယ်၏လက်ချောင်းလေးများ ကွေးချည်ဆန်.ချည်ဖြစ်လျက် ဘာကိုင်ရမှန်းမသိဖြစ်နေရှာသည်။ အောင်စိုးက ဖင်ကြီးကို ပုံမှန်လေးဆောင့်လိုးပေးနေရင်းလက်တစ်ဖက်က ပေါက်စီလေးများနှယ် အိအိထွေးထွေး လုံးလုံးကျစ်ကျစ် နို.လေးနှစ်လုံးကို ဆုပ်ကိုင်နယ်ဖတ်ပေးလိုက်ရာ အငယ့်ခမျာ ဆားအလူးခံရသော ဖားပျံမလေးအလား ကော့ .. ကော့ တက်သွားရှာလေတော့သည်။
” အ .. အစ်ကို ..အိ ..အင့် … အင့် … အင့် .. အ … အား ” ” ပြွတ် .. ပြွတ် .. ဖတ် .. စွတ် .. ပြွတ် .. ဖတ် .. ဖတ် ” လိင်အင်္ဂါ နှစ်ခုကြားမှ ယိုစိမ့်ကျလာသော အရေချွဲချွဲများက ဘေးသို.လျှံကျလာသည်။ အသံများလည်းပိုမိုကျယ်လောင်လာသည်။ ” ရှီး .. အား .. တစ်မျိုးကြီးပဲနော် .. အင့် .. အ ” ” နာရင်ပြောနော် အငယ့် .. အ… အ ” ” အင်း .. အင်း … နာတာလဲမှုတ်ဖူး အစ်ကိုရယ် .. တစ်မျိုးကြီးရယ် … အငယ်မပြောတတ်ဖူး ” အယုအယ သမုဒယနယ်မှ ကာမမီးလောင်ပြင်ဝယ် စိမ်ပြေနပြေ တူယှဉ်တွဲလျှောက်နေမိကြသော အငယ်နှင့် အောင်စိုးတို.နှစ်ယောက် ဝေလင်းတို.ပြန်လာသံကြားမှ ကမမ်းကတမ်း လူချင်းခွဲကာ အိနြေ္ဒ ရရ ပြန်ထိုင်နေလိုက်ကြသည်။ သို.သော် .. သို.သော် … အခန်းထဲ ၀င်လာသောဝေလင်းက နှာခေါင်းကို ရှုံ.ပွ ရှုံ.ပွ လုပ်သည်။ ” ဟင် .. ရှူး .. ဟင်း .. ရှူ .. ဘာအနံ.လဲ … စိမ်းရွှေရွှေကြီးနဲ့.. အား .. ဟုတ်ပြီ .. ဒါ .. ဒါ .. မှိုနံ့ကွ .. ဟဲ ဟဲ … မှိုတွေပေါက်ပြီ ထင်တယ် ” အငယ် ခေါင်းမဖော်ဝံ့တော့ .. အောင်စိုးက မျက်ရိပ်မျက်ကဲဖြင့် ဝေလင်းကိုပြန်ထွက်ခိုင်း၇သည်။ ” ဟေး .. အလဲ့ မင်းတို.ကိစ္စပြီးသွားကြပြီကိုး ” ” ဟယ် .. ဝေလင်းကလဲ .. ဘာတွေပြောမှန်းမသိဘူး ” ” ရှက်မနေပါနဲ. .. ဒါဓမ္မတာပဲ .. ယူလိုက်ကြတော့ ” ” အစ်ကိုက ရယ်နေ .. ဘာမှလဲဝင်မပြောဘူး ” ” ဝေလင်းပြောတာ ဟုတ်နေတာပဲ အငယ်ရဲ. ဟားဟား ” ” သွား .. သွား … အစ်ကို မကောင်းဘူး .. သွား ” ဝေစီသော ရန်တွေ.သံလေးနှင့် အတူ ချစ်သောအငယ်၏ လက်သီးဆုပ် နုနု လေးများ အောင်စိုးရင်ဘတ်ကို တဖုံးဖုံး ကျရောက်လာလေတော့သည်။
ဆောင်းသည် .. ရက်စက်လွန်းလှသည်။ အထီးကျန် အပြစ်မဲ့ ဘ၀ကိုမှ ရွေးပြီး နှိပ်စက် ကလူပြုရက်လွန်းသည်။ ဆောင်းနှင်းတို.ကို ခင်ထွေးချစ်သည်။ ပန်းခြံသို. ခင်ထွေးမသွားဘဲ အပြင်မှ ဖောက်သည် ယူရောင်းခဲ့သည်မှာကြာခဲ့ပြီ ။ လေးလေးကလဲ ခင်ထွေးကိုလိုက်မရှာ .. မတွေ.ဘဲနေခဲ့သည်မို. ခင်ထွေး နေသာဖြေသာခဲ့သည်။ ယခုတော့ ဆောင်းကတမှောင့် .. အေးလွန်း စိမ့်လွန်း ချမ်းအေး လွန်းလှဘိသည်။ ချစ်သူရင်ခွင်နွေးနွေးကို ခုံမင်ဖွယ် တွယ်မှီချင်စရာ ကောင်းသော ဆောင်းကာလက ဆိုက်ဆိုက်မြိုက်မြိုက်ကြီး ခင်ထွေးတစ်ဦးတည်းထံသို.လာသလို ခံစားရမိသည်။ ရက်စက်လိုက်တာ … ဆောင်းရယ် … ။ ” ခင်ထွေး .. ပြန်ကြစို.လေ ” ဈေးရောင်းဘက် မမြက သတိပေးမှ ပန်းတောင်းလေးကို ခါးစောင်းကောက်တင်ပြီး ပန်းဖောက်သည်ယူရန် ထွက်ခဲ့ကြလေသည်။ ကတ္တရာလမ်းမှ ဖယ်ထွက်ကာ မြေနီလမ်းကလေးအတိုင်း ဆင်းလာသော ခင်ထွေးနှင့် မမြတို.နှစ်ယောက် နှင်းမှုန်တွေထဲ၌ ဝေေ၀၀ါးဝါး မြင်နေရသည်။ ” စောက်နှင်းတွေကလဲ ကျလိုက်တာတော် .. ရှေ.ကို မမြင်ရတော့ဘူး .. ဟင်း ” မမြက သူ.ဗီဇ အတိုင်း စောက် တစ်လုံး အပိုထည့်၍ တတွတ်တွတ် ပြောရင်း သွားနေသည်။
လမ်းဘေးဝဲယာနှစ်ဖက်မှ ခြုံနွယ်များထက်သို.လည်း ကိုရွှေနှင်းတို.က သဲသဲမဲမဲ ကြဲပက်နေကြသည်။ နှင်းက မျက်နှာမရွေး .. အေးမြစေတာပါ။ ဆောင်းရဲ. စေတနာကို ခင်ထွေးမခံယူတတ်တာပါ … အဲလေ .. လေးလေးက ဆောင်းဖြစ်မလား … ” ဟဲ့ .. ခင်ထွေး … ငါမေးနေတာကြားလား ” ” ဘာလဲ … အစ်မမြရဲ. ” ” အောင်စိုးတို.ခြံက ဂန္ဓမာဝင်ယူဦးမလားလို. ” ” ဟင့်အင်း .. အစ်မမြ ၀င်ယူချင်ယူလေ … ကျွန်မ ဒီသစ်တိုပင်ကြီးနားကပဲ စောင့်နေမယ် ” ” နေပါဦး .. ညည်းနဲ. အောင်စိုးဘာဖြစ်လို.လဲ ” ” အိုး … အောင်စိုးနဲ. ဘာမှမဖြစ်ပါူဘး .. ဘယ်သူနဲ.မှလဲ ဘာမှမဖြစ်ဖူး .. ပန်းတွေကပိုးများလို. ” ” ဟဲ့ .. ခုတလော စနိုးဘော ရဲလိုး ဘော .. ဂန္ဓမာနှစ်မျိုးလုံး ပိုးကင်းပါ့တော် … ကျုပ်ပဲယူနေတာဟာကို ” မမြကို ခွန်းတုန်.ပြန်ခြင်းမပြုဘဲ ပန်းခြင်းကို သစ်တိုပင်ခြေရင်း၌ ချရင်း အနွေးထည် အပါးစားလေးကို ရင်စေ့ပြီး လက်ပိုက်ထားလိုက်သည်။ မမြကဘာတွေမှန်းမသိ ပြောတော့ပြောသွားသည်။ ဗြစ်တောက်ဗြစ်တောက်နှင့် ပန်းခြံဆီသို. ဦးတည်ထွက်ခွာသွားလေသည်။ ဆောင်းရယ် … နှင်းတွေသိမ်းပေးပါလားကွယ် … ခင်ထွေးရင်မှ တမ်းတမ်းတတလေးပြောနေမိသည်။ ခန်.ညားသောသွင်ပြင်နှင့် လေးလေးရုပ်ကိုလည်း တစ်ခါတစ်ရံ မျက်စေ့ထဲ ထင်ယောင်လာသည်။
နုပျိုထွားကြိုင်းသော အောင်စိုးမျက်လုံးဝင်းဝင်းလက်လက်များကိုလဲ မြင်နေ၏။ ခင်ထွေး သက်ပြင်းချသည်။ မလိုလားသူ၏ ခြံမြေ၌ လိုလားသူရှိနေခြင်းက ခင်ထွေးအတွက် အထီးကျန်ဘ၀ကို တွန်းပို.ပေးခဲ့ခြင်းပင် ဖြစ်မည်ထင်သည်။ အကယ်စင်စစ် အောင်စိုးမျက်ဝန်းတို.မှ အာသာဆန္ဒကို ခင်ထွေးဖတ်ယူနိုင်ခဲ့သည်ကို မူ မိမိဖာသာသိသည်။ ” အောင်စိုး ငါ့ကို ကြည့်တဲ့ အကြည့်တွေကတစ်မျိုးရယ် ” ခင်ထွေး အတွေးစလေးများ လေ၀ယ်လွင့်လူးစပြုသည်။ သိပ်သိပ်သည်းသည်း ဆောင်းနှင်းတို.က နံနက်ခင်းနေခြည်၏ ထိုးစစ်ကို ခံစစ်ဖြင့် ဆုတ်ခွာစပြုလာသည်။ နွေးထွေးသော နေခြည်နုလေးပြူစ ထွက်စ ” အောင်စိုး မိန်းမရနေပြီတော့ … သူဟာမလေးက ဖြူဖြူလုံးလုံးလေး ချစ်စရာလေး … သိလား … ငယ်လေးတဲ့ …. အမလေး .. သူ.မိန်းမလေးကသူ.ကို အစ်ကို တောင်မဟုတ်ဖူးတော်ရေ. .. ကို တဲ့ တစ်လုံးထဲ ” ကို တဲ့ တစ်လုံးထဲ … အောင်စိုး မိန်းမ၇နေပြီ … ဖြူဖြူလုံးလုံးလေး … ခင်ထွေးဦးနှောက်တစ်ခုလုံး ချာလည်ပတ်လည်ဖြစ်သွား၏။ မြန်လိုက်တာ အောင်စိုးရယ် … ရင်မှာ အောင့်သည့် အချက် မျက်ဝန်းများ ထုတ်ဖော်ပြသပြီးမှ အောင်စိုး အဘယ်သို. သွေဖီရက်လေသည်ကိုတော့ ခင်ထွေးမမှန်းဆတတ်တော့ … ခင်ထွေး အံကလေးတင်းတင်းကြိတ်သည်။ မမြကလည်း အောင်စိုးမိန်းမချောကြောင်း ငယ်ကြောင်း သူ.ယောက်ျားကို ကြင်နာကြောင်း တောင်စဉ်ရေမ၇တွေပြော၏။ ခင်ထွေး နားကကြားတချက် မကြားတချက် တဖက်သတ် အချစ်နယ်မှ လွင့်စင်ကွဲကြေသွားသော နှလုံးသား အပိုင်းအစလေးများကို နှလုံးသားကောင်း တစ်ခုဖြစ်ရန် ဆက်စပ် စုစည်း၍ရကောင်းသေးသည်ဟု ခင်ထွေး ကဗျာ ဆန်ဆန်တွေးသည်။ မှုန်ရီသော ၀န်းကျင်ဝယ် စူးရှဝင်းလက်သော နေရောင်ပူနွေးနွေးက စိုးမိုး လွှမ်းခြုံလာသည်။
” အောင် .. အောင်စိုးရယ် … နင်က သည်ပွဲမှာ ငါ့ကို သက်သက် ခလုတ်တိုက်ခဲ့တာပေါ့လေ … ဟုတ်လား .. အေး … နင်တို.ယောက်ျားလေးတွေ ခလုတ်တိုက်သလို ဒို.မိန်းကလေးတွေလဲ အရွဲ.တိုက်တတ်တယ် အောင်စိုး … နင်သိလား .. အဲ့ဒါနင်သိလား … ဟင် ” . ” လာ .. ခင်ထွေး … လေးလေးကိုခွင့်လွှတ်ပါကွယ် … တကယ်တော့လေးလေးဟာ ယုတ်မာ စုတ်ပဲ့တဲ့ လူကြီးလူကောင်းတစ်ယောက်ပါပဲ ” လေးလေးအသံတွေက နောင်တများနှင့် ရောနှောနေသည်။ ခင်ထွေးခေါင်းကို ငုံ.ထားသည်။ လေးလေးခြေထောက်မှ ကတ္တီပါ ကြိုးအနက်နှင့် လေယာဉ်ပျံဖိနပ်ကို အဓိပ္ပါယ်မဲ့ကင်းစွာ ငေးမိနေသည်။ ” အရင်လိုပဲ ပန်းယူပါ … အရင်လိုပဲ ၀င်ပါထွက်ပါ … အရင်လိုပဲ ခေါ်ပါပြောပါ နှုတ်ဆက်ပါ ခင်ထွေးရယ် ” အသက် ၄၀ ကျော်တွေနှလုံးသားစကားပြောတာ ရယ်စရာကောင်းသလားမသိဘူး … ကဘောက်တိကဘောက်ချာ လိုလိုကြီး … တစ်ချိန်က ခင်ထွေးက လေးလေးရဲ.သားကောင်ဖြစ်ခဲ့ဖူးသည်လေ … ကျားဘုရင် တစ်ကွက်မှား၍သာ သားသမင်အခက်ပွားရာမှ လွတ်ခဲ့ရဖူးသည်။ ဖြစ်ခဲ့တာတွေပြည်ဖုံးကားချကြစတမ်းဆိုလျင်လည်း ခင်ထွေး ကလူပုံအလယ်၌ လက်မှတ်ရေးထိုးလိုလှသည်။ အမေက မမာမကျန်း … မောင်လေးတစ်ကျောင်းက ကျောင်းနှစ်ဝက်နှင့် ထွက်ရသည်မှာလိုလို … စီးပွားရေးက သည်ခြံကပန်းယူနေစဉ်ကထက်များစွာနိမ့်ပါးခဲ့သည်။ ယင်းအခက်အခဲများနှင့် သူ.အပေါ် အနိုင်နှင့်ပိုင်းသွားခဲ့သည်ဟု ယူဆရသော အောင်စိုးထံသို. ပြင်းထန်သော တန်ပြန်ဒုံးကျည်တစ်စင်း ပြန်လွှတ်ရေးအစီအစဉ်များမှာ ဤခြံထဲသို. ပြန်လည်ခြေချရခြင်း၏ အဓိကကျသော အချက်အလက်များသာ ဖြစ်သည်။ လေးလေးက ယခင်ကထက် အနေပိုတည်သည်။
ယခင်ကထက်လည်း ပန်းမျိုးစုံပေးသည်။ တော်တည့်မှန်ကန်သော သမာသမတ် မေတ္တာလမ်းပေါ်၌ လေးလေးလျှောက်နိုင်ရန် ကြိုးစားနေမှန်း ခင်ထွေးအတတ်သိနေသည်။ သို.သော် မိန်းကလေးဆိုသည်က ကမ္ဘာဦးကတည်းက ခံစစ် … အစမရှိဘဲ အဆုံးသတ်မရတတ်ချေ။ ခင်ထွေးတစ်ယောက် ယခင်ကလို အိနြေ္ဒမပျက် ၀င်ထွက်သွားလာနေပြန်တော့ အရာရာသည် ယခင်ကလိုပင် ငြိမ်းချမ်းအေးမြနေပြန်၏။ ” ဒီနေ. ဒက်ဖနီတွေ အရမ်းလှတယ် ခင်ထွေး ” ” အင်း .. ဟင့်အင်း .. ကျွန်မ ရှိုးနဲ. ရေမွှေးပဲယူမယ် ” အရာရာ လေးလေးက စေတနာနှင့် လမ်းကြောင်းသမျှ ကိုလဲ ခင်ထွေးက တမင်ဖဲကျဉ် ရှောင်ခွာခြင်းအမှုကိုပြုသည်။ သည်သောအခါ လေးလေးမျက်နှာ နွမ်းရိညှိုးခြုံးသွားရုံမှ တပါး အခြားစကားမဆိုတော့ဘဲ လှည့်ထွက်သွားလေ့ရှိသည်။ ” အစ်မ .. မနေ.က ပန်းဖိုး ကျန်သေးလားဟင် ” အငယ်က စာရင်းစာအုပ်လေးကိုင်ရင်း ခင်ထွေးလေး၌ ညင်သာစွာထိုင်ချရင်းမေးသည်။ ” ဟင့်အင်း .. ကျွန်မ ကြွေးယူလေ့ယူထ မရှိပါဘူး ” ” စိတ်မရှိနဲ.နော် အစ်မ .. အငယ်က တစ်ခါမှ လုပ်ဖူးတာမဟုတ်ဖူး .. လူတွေလဲစုံအောင်မသိတော့ မှားတယ် .. ကို ကလဲ မအားဘူး အစ်မရဲ. … အစာတိုက် ဆေးဖြန်းနဲ. . ဒါတောင် ရေလောင်းသမားတွေ ငှားထားသေးလို. ” အငယ်က ပကတိ ရိုးစင်းစွာပြောနေငြားလည်း ခင်ထွေးစိတ်၌ အသားလွတ် ကြွားနေသည်ဟုမြင်လာသည်။
” ဒီခြံမှာ ညီမမရောက်ခင်ကတည်းက အစ်မရောက်ခဲ့တာပါကွယ် … ခြံအလုပ်ကတော့ အားဘယ် ဘယ်ရှိပါ့မလဲ ” တစ်လုံးလေးပဲ ဖြစ်ဖြစ် .. ခင်ထွေးက ကျောပစ်ချင်မိသည်။ အတ္တ၏ ပြင်းထန်သော ရိုက်ချက်လေးများ ခင်ထွေးရင်ကို စူးစူး အောင့်အောင့်လေး နှိုးဆွ ရိုက်ခတ်မိကြသည်။ ” ခင်ထွေး .. တကယ်ပြောတာလား ဟင် .. တကယ်ပြောတာလား ” လေးလေးက ထီပေါက်သလို ထခုန်ပြီး ခင်ထွေး ကိုယ်လုံးလေးကို ရဲရဲတင်းတင်းလေးဖက်ထားလိုက်သည်။ ခင်ထွေး တစ်ကိုယ်လုံး နတ်ကျသလို တုန်ရီသွားသည်။ မခံချင်စိတ်ဖြင့် လေးလေးကိုလက်ခံမိလိုက်သော်လည်း သည်နှယ် အထိအတွေ.ကြီးက ခင်ထွေးကို ခြောက်ခြားစေသည်။ လူကြီးစုံလင်စွာနှင့် ခင်ထွေးတို. လက်ထပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဆောင်းရယ် … ညလဲ ညမို. … သိပ်ရက်စက်တယ်ကွယ် .. ခင်ထွေး အမြတ်တနိုး သိမ်းဆည်းထားတဲ့ နှလုံးသား ပန်းပွင့်လေးကို ချေမွ ဆုတ်ချေပစ်ဖို. ဆောင်းကအားပေးပြန်တယ် … ” ခင်ထွေး .. ဒီဘက်လှည့်လေ ” ဆိုးလိုက်တဲ့အ ဖြစ် … သည် သားရဲကျင်းကို အသက်လုပြေးထွက် ၇ုန်းခွာခဲ့ပြီးမှ မိမိဖာသာ ပြန်ဝင်ရလေခြင်း … မင်္ဂလာဦးည … လူသားတွေ စိတ်ဝင်စားတဲ့ညလေ …။
ကျားနဲ.မ ပထမဆုံး ကာမစပ်ယှက်ကြမဲ့ညဆိုတော့ လူတွေက မင်္ဂလာဦးည ဆိုတာကြီးကို သိပ်အာတွေ.ကြတယ် … ခင်ထွေး ဇောချွေးတွေပြန်နေရတယ် … မီးပူတိုက်ထားတဲ့ အိပ်ယာခင်းတွေ ကြေမွကြတော့မယ် … ဖြူစင် တဲ့စောင်တွေ … ခြင်ထောင်တွေ .. သွေးစွန်းထင်းကြတော့မယ်လေ … ပျော်ကြတယ် မို.လား …။ ခင်ထွေး နို.နှစ်လုံးကို ပထမဆုံးလေးလေးစကိုင်ကတည်းက ခင်ထွေးတစ်ကိုယ်လုံးကို လျှော့ချပြီးသားပါ … သူ.မယားဖြစ်နေပြီပဲ … ယောက်ျားတွေ မိန်းမယူတယ်ဆိုတာ အဓိက ကဒါလုပ်ချင်ကြလို.ပဲ ။ မျိုးစပ်ချင်ကြတာ … ဘ၀ကြင်ဖော်ဘာညာ အလကား စောက်ပိုတွေ ။ ဟို .. အစ်မတစ်ယောက်လုံး ယူထားပြီးတာတောင်မှ ခယ်မသေးသေးလေးကို ဗြောင်လိုးနေတဲ့ ကုလား ခင်မောင်ထွေးလို ကောင်တွေက ဒုနဲ.ဒေး ဥစ္စာ … ဘ၀ကြင်ဖော်ဖြစ်ဖြစ် ဘ၀ဖင်ဆော်ချင်လို.ပဲဖြစ်ဖြစ် မိန်းမနဲ.ယောက်ျား အိပ်ယာထဲရောက်ရင်တော့ လိုးဖြစ်သွားတာပဲ … အခုလဲ ခင်ထွေးဘာလုပ်စရာလိုသေးလဲ …။ ရုန်းဖို.ကန်ဖို.ဆိုတာ ခင်ထွေးမှာ ဇနီးမယားတစ်ယောက်အနေနဲ. လုပ်ပိုင်ခွင့်ဆုံးသွားပြီလေ … ဒီတော့ သူ ထမီလှန်တာလဲ မျက်စေ့မှိတ်ပြီး ငြိမ်ခံနေရတာပဲ … စောက်ဖုတ်ကို တရွရွ ပွတ်ပြီး ကစားစရာ အသစ်လေးရသလို ကိုင်ကြည့်နေတာလဲ ခံနေရတော့တာပဲလေ ။ ခင်ထွေး ပေါင်နှစ်လုံးကိုဆွဲထောင်လိုက်တယ် ။ လောင်းလောင်း ဟင်းလင်းလေး အာပြဲနေတဲ့ စောက်ခေါင်းလေး အ၀ဟာ ဟပြဲနေမယ်ဆိုတာ ခင်ထွေးသိတယ် … မဲမဲကြီး တုန်ခိုင်တဲ့ လေးလေးလီးကို ခင်ထွေးမကြည့်ချင်ဘူး ..။ ဟိုလေ … ရွံသလိုလို ကြောက်သလိုလို ပြီးတော့ … ဒီလီးဆိုတာကြီးကို ကြည့်ရမှာ မျက်စေ့ရှက်တာ …။ ” လိုးကြမယ်နော် … ခင်ထွေး ” မုဆိုးဖို တစ်ခုလပ်ဆိုတော့ ပါးစပ်ရဲတာပေါ့ … ဒါပေမဲ့ ခင်ထွေးနားထဲ ပူပူရှိန်းရှိန်း ကြီး … မကြားချင်သလိုပဲ ..။ ” နဲနဲနာမယ် ထင်တယ် … ခင်ထွေးဟာလေးက နဲနဲသေးတယ် … ခဏလေးပါ … အောင့်ခံနော် …မိန်းမ ” တောက် … အတော်စကားအပိုပြောတတ်သောလူပဲဟု ခင်ထွေးဒေါကန်ချင်လာသည်။
တရုတ်နံ.ရေမွှေးနံ.တွေသင်းနေတဲ့ မင်္ဂလာအိပ်ယာခင်းထက်မှာ ပထမဆုံးအသားပုတ်နံ.လိုလို အနံ.ကို ခင်ထွေးခံစားရတယ် ။ လေးလေးရဲ. အိုဗာဟောင်းပစ္စည်းကြီးက ထွက်လာတဲ့ အနံ.အသက်ဆိုတာလဲ ခင်ထွေးသိနေတယ် ။ စိတ်ထဲမှာ အဟောင်းနဲ.အသစ်ဆိုတဲ့ ရုပ်ပိုင်းခန္ဓာ ကွာဟမှုကြောင့် အလိုမကျသလိုခံစားရသည်ကတော့ အမှန်ပဲဖြစ်သည်။ ပူကနဲ ကိုယ့်စောက်ခေါင်းထဲကို အညစ်အကြေး ဗလပွနဲ. လေးလေးပစ္စည်းကြီး လိုးဝင်သွားတာကို ခံစားလိုက်ရတယ် ….။ မင်္ဂလာဦးညမို. မိမိအင်္ဂါစပ်လေးကို ဆပ်ပြာမွှေးနဲ. ရေဆေးသန်.စင်လာပါလျက် … သူကနံစော်နေသော သူ.လီးကို လုံးဝဆေးကြော သုတ်သင်ခြင်းမပြုဘဲ လိုးထည့်လိုက်ခဲ့ခင်း ကိစ္စမှာ ခင်ထွေးဘက် တစ်ချက် မကျေမနပ်ဖြစ်ရခြင်းပင် …။ သို.သော် ပြစ်ပြစ်နှစ်နှစ်ပယ်ပယ်နယ်နယ်ကြီး အလိုးခံရပြီဆိုသော အသိက အရာရာကိုေ၀၀ါးမှေးမှိန် ပစ်လိုက်လေသည်။ စောက်ခေါင်းထဲသို. ပြည့်ကြပ်စွာ တင်းတင်းကြီး ၀င်လာသော လီးကြီး အရသာက တစ်ကိုယ်လုံးကို ဖျင်းကနဲဖြင့် လွှမ်းခြုံ ရစ်သိုင်းလိုက်သည်။ ခင်ထွေးလက်ဖျားက လေးလေးကျောပြင်ကို အလိုအလျောက် ဖက်တွယ်မိကြသည်။ ဒ ဖင်လေးကို ကော့ထားရင်း တင်းခံထားရသဖြင့် ဆီးခုံလေးက ယောက်ျားတွေအကြိုက် ခုံးမို. ဖောင်းကားနေ၏။ ခင်ထွေးက အပျိုဖော်ဝင်ကတည်းက အမွှေးသန်သည်။
စောက်မွှေးမဲမဲလေးများက နက်မှောင်နေသည်။ ၀င်ထားသော လီးကိုယ်ထည်ကြီးအဆုံးဝင်လာသည်နှင့် စောက်စိနီနီလေးက မမီမကမ်း လှမ်းထောက်သည်။ ထောက်ဖိထားသော စောက်စိလေးပြားကျသွားအောင်လည်း လေးလေးက ဖိဆောင့်၍ လိုးထည့်လိုက်သည်။ ဤ သို.နှယ် လေးလေးကခပ်ပြင်းပြင်းလေး ဖိဆောင့်လေ ခင်ထွေး မျက်ရည်ဝဲအောင်ခံစားရလေဖြစ်ရသည်။ စောက်ခေါင်းထဲ၌ တစ်ကြိမ်မျှအလိုးမခံဖူးသေးသော အသားမျှင်များက ပွတ်ကြိတ်နာကျင်ကြဟန်ရှိသည်။ သို.သော် အရှိန်ရလာသောအခါ စောက်ခေါင်းနံရံမှ အဆိုပါ အသားမျှင်များက လီးကြီးကို ဖက်တွယ်ထားကြ၏။ စုတ်ယူထားကာ ပြန်ထွက်သွားမှာကို စိုးရိမ်လာကြ၏။ ” ဗြွတ် .. ဗြွတ် .. စွတ် .. စွတ် ..ဖွတ် ..ဖတ် .. ပြွတ် ..” ” အင်း .. အင်း .. အင်း .. အင်း .. အမလေး လေး ..အား ” ခင်ထွေး ဆံပင်တွေပြေကျကုန်သည်။ ဟာလာဟင်းလင်းဖြစ်နေသော နို.ကြီးနှစ်လုံးက အထိန်းအကွပ်မဲ့စွာ ရှေ.နောက် ဘယ်ညာလှုပ်ရမ်းနေကြသည်။ ခင်ထွေး မခံနိုင်အောင် ကျင်တက်စိမ့်အီလာတော့၏။ သက်သာလို သက်သာညားဖင်ကို လူးလိမ့်၏ ။ စကောဝိုင်း၏ ။ ကော့ ကော့ဆောင့်ပေး၏။ မှန်၏။ ဤ အပြုအမူက ခင်ထွေးကို အင်မတန်ကောင်းမွန်ပြည့်ဝသော အလိုးခံခြင်းကာမအရသာကို အပြည့်အ၀ပေး၏။
” အီး ..အား .. အမေ့ .. အ .. ရှူး ..အ အား ” ခင်ထွေး စောက်ခေါင်းထဲမှ ပွက်ကနဲ အရေများပန်းထုတ်လိုက်သည်။ လေးလေးကမူ အရှိန်ကောင်းဆဲ … ” ပြွတ် .. စွတ် .. ဘွတ် .. ပြွတ် .. ဖတ် .. ဖတ် .. ပြွတ် ” ဆက်တိုက်ကြီး ဆောင့်လိုးနေသော လေးလေးဖင်ကြီးကို ခင်ထွေး တအားဖိချတတ်လာသည်။ ဖင်လေးကော့ပြီးလဲ ခံတတ်လာသည်။ ခင်ထွေး ခေါင်းထဲ လောလောဆယ်တစ်ခုပဲရှိသည်။ အလိုးခံခြင်းဆိုသည် ကောင်းလေစွ လေးလေးကိုခင်ထွေး မချစ်ဖူးဆိုသည်ကတော့သေချာ၏။ မိမိကိုယ်ကို လည်း သည်သို.ပင် နားလည်ထားသည်။ ဘ၀ပေးအခြေအနေနှင့် နှလုံးသား တစောက်ကန်းဆန္ဒလေး တွေကြောင့် ခင်ထွေး လေးလေးကို ယူခဲ့မိခြင်းဟုလည်း သိထား၏။ သို.စဉ်လျက် .. ဤနှယ် ဖိုမဆက်ဆံရေးအ ချိန်ကာလတွင် လင်မယားဆန်သော ခင်ထွေး နှလုံးသား တုန်.ပြန်မှုတို.က ဆန်းကြယ်လွန်းသည်။ လေးလေးကို လက်နှစ်ဖက်နှင့် တအားဖက်ထားချင်သည်။ လေးလေးခွာသွားမှာကို စိုးရိမ်သည်။ လေးလေး၏ ပါးပြင်ကြမ်းကြမ်းကြီးကိုလည်း နမ်းရှုံ.မိပြန်သည်။ လေးလေးက နသိုးကြိုးပြတ် တရှူးရှူး တရှဲရှဲ ညှောင့်လေ ခင်ထွေးလေးလေးကို တိုး၍တိုး၍ ဖက်ထားမိလေပင်။ လေးလေး ၏ တန်ဆာက ခင်ထွေးစောက်ခေါင်းထဲ၌ ပြည့်ဝသောကာမအရသာကို ပေးနေသည်။ ကြီးမားရင့်ထော်နေသော လေးလေးပစ္စည်းကြီးကို ခင်ထွေးချစ်သည်။ ဖြစ်နိုင်လျှင် ပါးမို.မို.လေးနှင့် အသာအယာလေး ဖိကပ်ပွတ်သပ်ပေးချင်သည်။
ဤအရသာ အထိအတွေ.ကို ခင်ထွေး အချိန်မရွေးရယူခံစားနိုင်ခွင့်ရှိနေပြီမို. .. ခင်ထွေးအတွက် အရာရာ ပြည့်စုံသော ခံစားမှုသည် ၀မ်းသာခြင်း ဒီရေလှိုင်းအသွင်သို. ကူးပြောင်းလာသည်။ တခစ်ခစ် ရယ်မောချင်လာသည်။ လီးထိပ်မှ နွေးကနဲ အထိအတွေ.က စောက်ခေါင်းထဲသို.သာမက ဗိုက်တစ်ပြင်လုံး ထဲအထိ ထိုးဝင်စိမ့်စီးသွားပြီး တအိအိ ရယ်မောချင်သလိုလည်းခင်ထွေးခံစားရပါသည်။ လေးလေးကို မချစ်မိခဲ့သည်မှာတော့ သေချာပါသည်။ ရွယ်တူတန်းတူ အောင်စိုး၏ တောက်ပသော မျက်လုံးအကြည့်များကို ခင်ထွေးစိတ်လှုပ်ရှားမိခဲ့သည်မဟုတ်လား …။ ” ပြွတ် .. စွတ် .. ပြွတ် .. ပြွတ် .. စွတ် .. ဖတ် .. ဖတ် ..ဖတ် ” လေးလေး က အသက် ၄၀ ကျော်ဆိုပေမဲ့ အသက် ၂၀ ၀န်းကျင်ခင်ထွေးအား မနားတမ်း ဆောင့်လိုးပေးနိုင်သည်။ခင်ထွေး နို.ကြီးနှစ်လုံးကို ပယ်ပယ်နယ်နယ် ဆုပ်ကိုင်ချေမွနေသော လေးလေးလက်ဖ၀ါးကြမ်းကြမ်းကြီးတွေကပင် ကြီးမားသော ကာမဆန္ဒစွမ်းအင်များ ထုတ်လုပ်ပေးရာ ဗဟိုဌာနကြီးလိုဖြစ်နေသည်။ နို.သီးခေါင်းနီနီလေးများကို လက်ညှိုးလက်မကြား၌ ဖြေးညှင်းစွာ လှိမ့်ပွတ် ကြိတ်ချေ ပေးတတ်သည်။ ထိုအခါမျိုး၌ ခင်ထွေးတစ်ကိုယ်လုံး အသွေးအသားများ ဗလောင်ဆူကာ စောက်ခေါင်းထဲ ၌ ငြိမ်သက် မာတောင်နေသော လေးလေး၏ တန်ဆာကြီးကို လှုပ်ရှားစေချင်သည်။ ကြမ်းတမ်းစွာ ထိုးနှက် စူးနစ်စေချင်သည်။ ထိုသောအခါ ဖင်ကြီးများ အလိုလိုလှိမ့်လူးလာ၏။ ဘေးတစ်ဖက်ကိုစောင်းပြီး သားအိမ်နံရံကို လီးထိပ်ကြီး ဒုတ် ကနဲ ဆောင့်ထိုးမိသည် အထိ ခန္ဓာကိုယ်ကို ဘေးသို.ရွေ.လျားပြီး လေးလေးဖင်ကြီးကို ဆွဲချမိ၏။ အလုံးအရင်းနှင့် မာတောင်ကြီးမားသော လီးကြီးက အရှိန်ပြင်းစွာ ၀င်သွားပြန်သောအခါ မနာပါပဲ ခင်ထွေးလည်ချောင်းမှ အီး ကနဲ ညည်းညူ သံက အလိုအလျောက်ကန်ထွက်သွားတတ်ကြပြန်သည်။ ” လေးလေး လိုးပေးတာ ကောင်းရဲ.လားဟင် ခင်ထွေး ” ” အင့် … အင့် …အ .. မသိဘူး .. မသိဘူး .. ” ပြီးပါပြီ ။